Wafdi ka socda Dawladda Somalia oo Garoowe uaaday +SAWIRRO | Wardoon
Home Somali News Wafdi ka socda Dawladda Somalia oo Garoowe uaaday +SAWIRRO
Wafdi ka socda Dawladda Somalia oo Garoowe uaaday +SAWIRRO
Mas’uuliyiintan safarkooda ayaa ku soo aadaya kaddib markii uu doorashada ku guuledarreystay C/Wali Maxamed Cali Gaas oo Warqad uu horay u soo saaray ku mamnuucay in xubnaha dowladda Federaalka ah tagaan Magaalada Garoowe isagoo ka Cabsi Qaba Dawladda.
Dhinaca kale Raysal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Hambalyo u diray Madaxwaynaha Cusub ee Puntland “Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha la doortay ee dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Waxaan Alle uga baryayaa in uu u fududeeyo mas’uuliyadda loo igmaday. Shacabka iyo mas’uuliyiinta Puntland-na waxaan ugu baaqayaa in lala shaqeeyo madaxwayne Siciid”.
Previous articleSaciid C/llaahi Deni oo la doortay Madaxweynaha Puntland
Next articleAxmed Karaash oo Noqday Madaxwayne ku xigeenka Cusub ee Puntland+VIDEO
Deni oo safar deg deg ah ku aaday Nairobi kadib markii…
Guddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo Gaalkacyo tagay+SAWIRO